IChiefs iphonsa inselelo kwiPSL ngolweCorona - Impempe
IChiefs iphonsa inselelo kwiPSL ngolweCorona
Bagcina bengu-52 abantu ababehaqwe yiCoronavirus kwiKaizer Chiefs, engayidlalanga imidlalo emibili yeDStv Premiership ngenxa yalokhu.
Lokhu kuvele esitatimendeni seChiefs lapho iqinisekise khona ukuthi izoludlulisela phambili udaba lwayo nePremier Soccer League (PSL) olumayelana nesicelo sokuhlehliswa kwemidlalo yaMakhosi yangoDisemba.
Ngesikhathi kuqubuka iCoronavirus eNaturena, iChiefs icele ukuthi ihlehliswe imidlalo yayo. Ngaleso sikhathi kwakumele idlale neCape Town City okuyinto eyagcina ingenzekanga. Omunye umdlalo engawudlalanga iChiefs owakumele ibhekane kuwona neLamontville Golden Arrows, eThekwini.
NgoMsombuluko iPSL ikhiphe isitatimemende lapho iveze khona ukuthi isamile ekutheni ngeke iyihlehlise imidlalo yeChiefs. Ithe kuzohlaluka ngoJanuwari 5 ukuthi kuzokwenzekani ngemidlalo engayidlalanga iChiefs.
Amakhosi athi ngeke asonge izandla mayelana nalolu daba, azoludlulisela phambili.
“Ngesikhathi sibhalela iligi bangu-31 ababehaqwe yiCorona okumbandakanya iningi labadlali bethu namanye amalungu eqembu,” kusho iChiefs esitatimendeni esikwi-website yayo.
“Lezi zibalo zinyukile emasontweni alandelile zaya ku-36, okulandelwe ukuthi zinyukele ku-48, kwagcina kungu-52 ngemuva kwamasonto amabili. Ukukhula kwezibalo ngale ndlela kuchaza ukuthi ukuvala kwethu iNaturena Village bekuwumqondo omuhle futhi kuhambisana nemigomo yoMnyango weZempilo.”
IChiefs ibhekene nesimo sokuthi imidlalo emibili engayidlalanga amaphuzu ayo anikwe iCity ne-Arrows, bese kuthiwe ishaywe ngo 3-0 kuyona yomibili.
“Ngokwelulekwa yithimba elibhekele ezempilo nabaphathi beqembu, ngemuva kokubheduka kweCorona eNaturena, kwacaca ukuthi ngeke iqembu liwudlale umdlalo wasekhaya neCape Town City ngoDisemba 4.
“Kuphinde kwahlaluka futhi ukuthi iqembu ngeke likwazi ukuya eThekwini ukuyobhekana ne-Arrows ngemuva kwezinsuku ezine. Ngesikhathi sekwehla ukuhaqeka, nabanye abasebenzi sebebuyela emsebenzini ngemuva kokugonqa, sizame ngakho konke ukuthi sidlale neSekhukhune United ngoDisemba 12.”
IChiefs ithe iphoxeke kakhulu ngendlela iPSL eluphathe ngayo lolu daba njengoba kuthathe amasonto amathathu wonke ukuthi ilunake.
“Amaligi amakhulu emhlabeni afana ne-English Premier League ayayihlehlisa imidlalo, yize bematasa, ukuzama ukuvimba ukubhebhetheka kwegciwane. Akukho obekuzozuzwa yiChiefs ngokuhlehliswa kwemidlalo, kunalokho bekuzodala ukuminyana kwemidlalo yeqembu ngasekupheleni kwesizini.
“Siyihambisa phambili impilo yabadlali bethu, esibaqashile, imindeni yabo, abalandeli nezwe lonke. Kumele kuqapheleke ukuthi iChiefs ayikaze, futhi ngeke, ingene enkundleni ibe inabantu abahaqekile ekhempini yayo,” kusho lesi sitatimende.
Sikugcizelele ukuthi iChiefs izoxhumana nabammeli bayo ukuze iluqhubele phambili lolu daba.
Previous Previous post: AmaZulu afuna ukudunga uKhisimusi wabeBucs
Next Next post: USweeney ubabaza ihlazo elenziwe onompempe kowoSuthu neDowns